क्यान्सरलाई कसरी चिन्ने ? अनि जोगिने कसरी ? | | Nepali Health
२०७३ भदौ २५ गते ९:४४ मा प्रकाशित
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डव्लुएचओ)का अनुसार हाल विश्वमा १ करोड ४१ लाख जनामा नयाँ क्यान्सर देखिएको छ । डव्लुएचओले नै क्यान्सरकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या ८२ लाख पुगिसकेको जनाएको छ । र यदि अहिलेकै अनुपातमा बढ्दै गएमा सन् २०२५ सम्म १ करोड ९३ लाख जनामा क्यान्सर देखिने अनुमान गरेको छ ।
क्यान्सर रोगको मुख्य कारक तत्वको खोजी गर्दा बदलिदो जीवनशैली, खानपान, बाताबरणीय प्रभाव प्रमुख रुपमा आउछ । नेपालमा यी तिनै पक्षहरु क्यान्सर रोगका लागि अनुकुल सिद्ध भएको पाइएको छ । त्यसैले पनि हामीकहाँ क्यान्सरका विरामी दिनानुदिन बढी रहेका छन् भन्न कुनै दुविधा छैन् ।
क्यान्सर एक जटिल रोग हो तर पनि करिव ४० प्रतिशत क्यान्सर रोकथाम गर्न सकिन्छ । एक तिहाई अर्थात ३३ प्रतिशत क्यान्सर समयमा पत्ता लगाएर उपचार गरी निको पार्न सकिन्छ । र बाँकी करीब २७ प्रतिशतलाई पनि उचित उपचारबाट आयु लम्याउन सकिन्छ । त्यो कसरी सम्भव छ रु त्यसका लागि यी कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
कोठी र मुसाहरूको रंग बदलिनु वा आकार बढ्दै जानु ।
धुलो,धुवाँ तथा वातावरणीय प्रदुषणबाट जोगिने ।
स्वस्थ त्वचाका लागि बेसनका पाँच फाइदा